Otú Onye Na-alubu Ọgụ Okporo Ámá Si Gbanwee
ISIOKWU TETA! A Nkasi Obi Dị Anyị Niile Mkpa
ISIOKWU TETA! A Otú Chineke Si Akasi Mmadụ Obi
ISIOKWU TETA! A Otú Chineke Si Akasi Anyị Obi n’Oge Nsogbu
ṄOMIE OKWUKWE HA “Ọ Bụ Jehova Nwe Agha A”
Akụkọ Devid na Golayat, Ò Mere Eme n’Eziokwu?
BAỊBỤL NA-AGBANWE NDỤ NDỊ MMADỤ M Na-ewebu Iwe Ọkụ, Na-alụkwa Ọgụ
Ụlọ Nche | Nke 5 n'Afọ 2016
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mongolian Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Akụkọ Adrián De la Fuente kọrọ
NDỤ M BIRI: E JI ỊLỤ ỌGỤ N’OKPORO ÁMÁ MARA M
A mụrụ m n’obodo Siudad Mante. Ọ bụ obere obodo mara mma dị́ na steeti Tamaulipas dị na Meksiko. Ndị obodo anyị na-emesapụ aka, dịrịkwa obiọma. Ma, ndị ọjọọ juru na ya anaghị ekwe ndị mmadụ ṅụrụ mmiri tọgbọ iko.
Anyị dị ụmụ nwoke anọ n’ezinụlọ anyị. Abụ m nke abụọ. Ndị mụrụ m mere m baptizim na Chọọchị Katọlik. M mechara soro ná ndị òtù ukwe na parish anyị. M chọrọ ime ihe dị Chineke mma n’ihi na achọghị m ịga ọkụ ala mmụọ.
Papa m na mama m gbasara mgbe m dị afọ ise, papa m ahapụ anyị. Ihe a o mere wutere m, meekwa ka obi gbawaa m. Aghọtaghị m ihe mere o ji hapụ anyị ebe anyị hụrụ ya n’anya. Ihe mama m bịaziri na-eme bụ, ya gaa ọrụ, ya anọọ ogologo oge ka o nwee ike inweta ego ọ ga-eji elekọta mụ na ụmụnne m ndị ọzọ.
M jizi ohere ahụ na-ahapụ ịga akwụkwọ mgbe ụfọdụ ma soro ndị tọrọ m na-akpagharị. Ha kụziiri m ịdụ ikwu, ise sịga, izu ohi na iti ọkpọ. Ebe m chọrọ ka ndị ọzọ na-atụ m ụjọ, m mụrụ otú e si eti ọkpọ, otú e si agba mgba, otú e si agba karat nakwa otú e si e ji ngwá ọgụ alụ ọgụ. M bidoro ịna-alụ ọgụ aghara aghara. M na-ejikarị égbè alụ ọgụ. O nwekwara mgbe ụfọdụ a na-akụ m ọ́ dị ndụ ọnwụ ka mma, ahụ́ m niile abụrụ ọbara ọbara, a hapụ m n’okporo ámá. Obi na-amapụ mama m ma ya hụ ebe m tọgbọ n’okporo ámá. Ọ na-eburu m ozugbo gawa ụlọ ọgwụ.
Mgbe m dị afọ iri na isii, otu enyi m nwoke aha ya bụ Jorge bịara n’ụlọ anyị. Mụ na ya matara mgbe anyị ka dị obere. Ọ gwara anyị na ya bụzi Onyeàmà Jehova nakwa na o nwere ihe dị mkpa ọ chọrọ ịgwa anyị. O bidoro jiri Baịbụl gwawa anyị ihe ndị o kweere. Agụtụbeghị m Baịbụl mbụ, obi tọkwara m ụtọ mgbe o si na Baịbụl gwa m aha Chineke na ihe ndị Chineke zubere ime. Ọ gwara anyị ka ọ mụwara anyị Baịbụl, anyị ekweta.
Obi ruru m ala mgbe m mụtara na ọkụ ala mmụọ adịghị nakwa na Baịbụl ekwughị gbasara ya. (Abụ Ọma 146:4; Ekliziastis 9:5) Ozugbo m mụtara ya, m malitere iji obi m niile na-atụ Chineke egwu, ọ bụghịzi nke m na-atụbu ya n’ihi na achọghị m ịga ọkụ ala mmụọ. M bịaziri were ya ka Nna hụrụ m n’anya, onye chọrọ ka ihe gaziere ụmụ ya.
Ka m nọ na-amụ Baịbụl, achọpụtara m na o nwere àgwà m ụfọdụ m kwesịrị ịgbanwe. M kwesịrị ịmụta ịdị umeala n’obi, kwụsịkwa ịna-alụ ọgụ ma a kpasuo m iwe. Otu ihe nyeere m aka bụ ihe e dere ná 1 Ndị Kọrịnt 15:33, ebe sịrị na mkpakọrịta ọjọọ “na-emebi àgwà ọma.” O mere ka m ghọta na tupu mụ enwee ike ịgbanwe àgwà ọjọọ m, m ga-akwụsịrịrị iso ndị ọjọọ na-akpa. Akwụsịziri m iso ndị enyi m mbụ akpa, metezie Ndị Kraịst ibe m enyi. Ndị Kraịst ibe m a nwee nghọtahie, ha anaghị alụ ọgụ, kama, ha na-esi otú Baịbụl kwuru ka e si kpezie kpezie.
Amaokwu Baịbụl ndị ọzọ nyeere m aka bụ Ndị Rom 12:17-19. Ebe ahụ sịrị: “Unu ejila ihe ọjọọ akwụ onye ọ bụla ụgwọ ihe ọjọọ. . . . Ọ bụrụ na o kwere omume, ọ bụrụhaala na ọ dị unu n’aka, unu na mmadụ niile dịrị n’udo. . . . Unu abọrọla onwe unu ọbọ, . . . n’ihi na e dere, sị: ‘“Ọ bụ m nwe ịbọ ọbọ; m ga-akwụ ụgwọ,” ka Jehova kwuru.’” M bịara ghọta na Jehova ga-eme ka ihe ọjọọ kwụsị n’oge ọ chọrọ nakwa otú o si chọọ ya. M jizi nwayọọ nwayọọ, kwụsị ịlụ ọgụ.
Anaghị m echefu ihe mere n’otu mgbede m na-alọta ụlọ echefu. Ụfọdụ ụmụ okorobịa nọ́ n’òtù ndị ha na ndị òtù m nọbu na ya na-alụ ọgụ bịara chọwa m okwu. Onyeisi ha kụrụ m ihe n’azụ, sị m: “Ngwa, kụgwara m!” M kpeere Jehova ekpere ozugbo n’obi m, sị ya nyere m aka idi mkparịa a. Ọ bụ eziokwu na ọ nọ na-enu m enu ka m kụgwara ya, m mechara hapụ ya gawa. Echi ya, m hụrụ onyeisi ha ahụ ka naanị ya so. Iwe eju m obi, mụ achọwa imegwara ya. Ma, m kpeere Jehova ekpere ọzọ ka o nyere m aka ijide onwe m. Ihe m na-atụghị anya ya meziri. Onyeisi ha ahụ bịakwutere m, sị m: “Biko ewela iwe maka ihe ahụ m mere gị ná mgbede ụnyaahụ. Ị̀ ma na m na-achọ otú m ga-esi adị ka gị? M chọrọ ịmụ Baịbụl.” Obi tọrọ m ezigbo ụtọ na m gbalịrị jide onwe m. E bidoziri mụwara ya Baịbụl.
O wutere m na ụmụnne m na mama m kwụsịrị ịmụ Baịbụl mgbe ahụ. Ma, m nọgidere na-amụ Baịbụl. Ekpebiri m na mee elu mee ala, agaghị m akwụsị ịmụ Baịbụl. Ama m na iso ndị Chineke na-akpa ga-eme ka obi ruo m ala, meekwa ka m nweta ụdị ndị m chọrọ ka mụ na ha na-anọ. M nọgidere na-amụ Baịbụl. N’afọ 1991, e mere m baptizim, mụ aghọọ Onyeàmà Jehova.
Abụbu m onye iwe ọkụ, na-alụkarị ọgụ, na-achọkarịkwa ka okwu bie n’ọnụ m. Ma, Okwu Chineke agbanweela ndụ m kpamkpam. Ugbu a, m na-ezi onye ọ bụla chọrọ ịnụ ihe Baịbụl kwuru ozi ọma gbasara otú ha na ibe ha ga-esi na-adị n’udo. M na-ekwusa ozi ọma oge niile kemgbe afọ iri abụọ na atọ ugbu a.
O nwere oge m gara rụtụ ọrụ n’alaka ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova dị́ na Meksiko. Mgbe m nọ ebe ahụ, m matara otu nwa agbọghọ bụkwa Onyeàmà Jehova. Aha ya bụ Claudia. Mụ na ya lụkwara n’afọ 1999. Obi dị m nnọọ ụtọ na Jehova ji ezigbo nwaanyị gọzie m.
N’oge ahụ, mụ na nwunye m nọ n’ọgbakọ Ndịàmà Jehova na-eji asụsụ ndị ogbi nke Meksiko amụ ihe. Anyị na-enyere ndị ogbi nọ́ ebe ahụ aka ịmụta gbasara Jehova. E mechara gwa anyị ka anyị kwaga Beliiz gaa kwusawa ozi ọma. Ọ bụ eziokwu na anyị anaghị ebi ndụ okomoko, anyị nwere ihe niile na-eme ka obi na-atọ anyị ụtọ. O nweghị ọrụ na-atọ anyị ụtọ ka ozi anyị na-eje ebe a.
Mama m na Ndịàmà Jehova maliteghachịrị ịmụ Baịbụl, ya emechaakwa mee baptizim. Nwanne m nwoke nke tọrọ m na nwunye ya na ụmụ ha atọ bụ Ndịàmà Jehova ugbu a. Mgbe m ghọrọ Onyeàmà Jehova, mụ na ụfọdụ ndị bụbu ndị enyi m malitere ịmụ Baịbụl. Ha bụkwa Ndịàmà Jehova ugbu a.
Ọ na-ewute m na ụfọdụ ndị ezinụlọ anyị nwụrụ n’ihi na ha akwụsịghị iwe iwe ọkụ. Á sị na agbanweghị m, ònye manụ ma m gaara adị ndụ ruo ugbu a? M na-ekele Jehova maka ime ka m mata ya, matakwa ndị na-efe ya. Ha ji ndidi na obiọma nyere m aka ime ihe Baịbụl kwuru.
Nke 5 n'Afọ 2016 | Ònye Ga-akasili Gị Obi ma Nsogbu Bịara Gị?
ỤLỌ NCHE Nke 5 n'Afọ 2016 | Ònye Ga-akasili Gị Obi ma Nsogbu Bịara Gị?